Laba Qof Oo 70 Sano luqad gaar ah ku wada hadla (Funny News) | Gaaloos.com
Home » Layaab » Laba Qof Oo 70 Sano luqad gaar ah ku wada hadla (Funny News)
Laba Qof Oo 70 Sano luqad gaar ah ku wada hadla (Funny News)
Manuel Segovia oo 75 jir ah, iyo Isidro Velazquez oo 69 jir ah waxa ay u dhasheen dalka Mexico waana labada qofood ee caalamka oo idil ku hadla luuqad ayaga u gaar ah, luuqada ay ku hadlaan ayaana lagu magacaabaa Ayapaneco, waxaana lagu sheegay in ay tahay luuqadii ugu horeysay ee dalka Mexico looga hadlo.
Inkastoo labadaan nin ay yihiin kuwa kaliya ee caalamka uga hadla luuqadan, hadana arinka yaabka badan ayaa noqday in labadoodu xitaa aysan isla hadlin sababo dhanka naxwaha luuqada quseeya awgeed, ayagoo sida la sheegay erayo dhowr ah isku qilaafsan taasina ay dhalisay in aysanba gabi ahaan isla hadlin.
Luuqadaan oo la sheegay in ay qarka u saaran tahay nabaad guur iyo in ay taariikhda caalamka ka suusho ayaa haatan waxaa ku mashquulsan sidi qaamuus loogu sameyn lahaa jaamacad ku taala dalka Mareykanka, ayadoo jaamacadani ay adeegsaneyso labadaan nin iyo sida ay luuqada ugu hadlaan, balse arinka ugu adag ayaa ah in aan labadaan nin la isu keeni karin, isla markaana wadahadal loo furi karin.
Isku soo wada duuboo arintaaan ayaa ah mid aad u yaab badan, ayadoo ay ka mid tahay wax yaabaha dunida ugu yaabka badan ee allah swt uu koonkaan ay ku nool nahay ku kala duway.
Title: Laba Qof Oo 70 Sano luqad gaar ah ku wada hadla (Funny News)